10 တစ်သက်တာ ခရီးစဉ်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 တစ်သက်တာ ခရီးစဉ်များ
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွား ဂျပန်, ရထားခရီးသွားနော်ဝေး, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား
တောထဲကို, သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သန္တာကျောက်တန်းအထိ, မြောက်ပိုင်းအလင်းရောင်အောက်မှာ, ဒါတွေကတော့ 10 တစ်သက်မှာ တစ်ကြိမ် ခရီးစဉ်များ. ဒါကြောင့်, ကင်ညာမှာ မမေ့နိုင်တဲ့ စွန့်စားခန်းကို သင်ရှာနေတယ်ဆိုရင်, သို့မဟုတ် မွန်ဂိုလီးယားနှင့် မော်စကိုကြား မည်သည့်နေရာတွင်မဆို, ဒါဆိုရင် ဒီနေရာတွေကို သွားကြည့်သင့်ပါတယ်။.
1. မဆိုင်းမာရ် အမျိုးသား ဘေးမဲ့တော, ကင်ညာ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တောရိုင်းနှင့် ရောယှက်နေသည့် နောက်ဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခု, Masai Mara အမျိုးသားအရံ တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ သွားရမယ့်နေရာပါ။. ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်း။, Masai Mara သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဆာဖာရီနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ထို့အပြင်, အဆိုပါ သဘာဝအရံ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံး ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရာ နေရာဖြစ်သည်။, ဧည့်သည်တိုင်းအတွက် အမှတ်အသားတစ်ခု ချန်ထားသည်။. ဒါကြောင့်, ကြီးစွာသော ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို သက်သေခံသည်။; တောကြောင်, မြင်းကျား၊, နှင့် မီတာအနည်းငယ်အကွာတွင်ရှိသော အခြားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များစွာတို့သည် ၎င်းတို့၏ သဘာဝအတိုင်း ခမ်းနားထည်ဝါသော ကျက်စားရာနေရာမှ အသက်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သော အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။.
ဒါကြောင့်, ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ သဘာဝနယ်မြေတစ်ခုတွင် ဘဝပြောင်းလဲစွန့်စားခန်းကို သွားလိုပါက၊, လေပူပူဖောင်းတစ်ခုဖြင့် ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်း သို့မဟုတ် 4X4 ဖြင့် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။. သို့သျောလညျး, ဇူလိုင်လနှင့်စက်တင်ဘာလအကြား သင်၏ဆာဖာရီအားလပ်ရက်ကို သင်စီစဉ်သင့်သည်။, ကင်ညာနိုင်ငံ၏ လမ်းများနှင့် နယ်မြေများကို အုပ်ချုပ်နေသည့် အံ့မခန်း အခမ်းနားဆုံး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် နွားများကို ကြည့်ရှုရန်, ရွှေ့ပြောင်းမှုကာလအတွင်း.
2. တစ်သက်တာ ခရီးစဉ်များ: မချူပီချူ
Andes တောင်တန်းများတွင် ပုန်းကွယ်နေပါသည်။, စွန့်ပစ်ထားသော်လည်း Machu Picchu မြို့ကို မမေ့ပါ။. ရာစုနှစ်များစွာ တောရိုင်းရာသီဥတုဖြင့် အင်ကာအင်ပါယာ၏ လှပသော အမွေအနှစ်များ ခိုင်ခံ့နေပါသည်။, ပီရူးအင်ပါယာ၏ နက်နဲသောအရာများကို နေ့စဉ်လာရောက်သူ ထောင်ပေါင်းများစွာအား မျှဝေရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။, ခြေဖြင့်, ဘတ်စ်ကား, ရထား.
Machu Picchu လည်ပတ်တဲ့အခါ, ရှေးဟောင်းမြို့တော်၏ အရွယ်အစားနှင့် တည်နေရာကြောင့် သင် အံ့ဩသွားလိမ့်မည်။. ပီရူးနိုင်ငံ၏ မည်သည့်နေရာ၏အလယ်တွင် ဤမြို့ကြီးအား မည်ကဲ့သို့တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားသနည်း။, ပဟေဠိတစ်ခုကျန်နေသေးသည်။. သို့သျောလညျး, အကြီးမားဆုံးသော လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ မြို့သူမြို့သား Machu Picchu ကို စွန့်ခွါရတဲ့ အကြောင်းရင်းပါပဲ။. ဒါကြောင့်, ခြံဝင်းအတွင်းရှိ လမ်းညွှန်ထားသော ခရီးစဉ်များစွာတွင် ပါဝင်ပြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် သင်ကြိုးစားရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။. ထို့အပြင်, ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နေရာများထဲမှ တစ်ခုကို သင် တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမည်။. ထို့ကြောင့်, Machu Picchu သို့ သင်၏ တစ်သက်တာ တစ်ခေါက် ခရီးစဉ်ကို အမြန်ဆုံး ကြိုတင်မှာရန် သေချာပါစေ။ 2022.
3. မော်စကိုမှ မွန်ဂိုလီးယားသို့ မွန်ဂိုလီးယားဖြတ်ရထား
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် မယုံနိုင်စရာအကောင်းဆုံးနေရာနှစ်ခုမှာ ဆိုက်ဘေးရီးယားနှင့် မွန်ဂိုလီးယားတို့ဖြစ်သည်။. ခေတ်မီမီးရထားပို့ဆောင်ရေး၏ ကျေးဇူးကြောင့်, ဒီနေ့တော့ ခရီးစဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့ နှစ်ယောက်စလုံးကို သွားလို့ရပါတယ်။, မွန်ဂိုလီးယား ရထားမှတဆင့်. မော်စကိုမြို့မှထွက်ခွာ, St. မှတဆင့်. Petersburg နှင့် Baikal ရေကန်, Gobi သဲကန္တာရ, ဘေဂျင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသည်။, မွန်ဂိုလီးယားဖြတ်ကျော်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။.
ရထားပေါ်ရှိ သင့်ပြတင်းပေါက်မှ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော မြင်ကွင်းများကို ရရှိစေရုံသာမက, ဒါပေမယ့် မင်းဖြတ်ကျော်ဖို့ ရှားရှားပါးပါး အခွင့်အရေးရှိလိမ့်မယ်။6အချိန်ဇုန်များ. ဤသည်တို့၌နေစဉ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်ကြာဆုံး ရထားစီးသည်။, မွန်ဂိုလီးယားဖြတ်ကျော် ရထားခရီးက သွားရတာတန်တယ်။. ဒါကြောင့်, အကယ်၍ သင်သည် ဘဝပြောင်းလဲနိုင်သော စွန့်စားခန်းကို ရှာဖွေနေပါက, ထို့နောက် လာမည့်နွေရာသီအတွက် ဤတစ်သက်တွင် တစ်ကြိမ်သွားမည့် ခရီးကို စတင်စီစဉ်သင့်သည်။.
4. တစ်သက်တာ ခရီးစဉ်များ: T ကရွမ်ဆို, နော်ဝေ
Meeting Aurora သည် ဘဝပြောင်းလဲခြင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဤ epic အစည်းအဝေးအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာသည် Tromso မြို့ဖြစ်သည်။. Aurora ဇုန်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ, နော်ဝေ အာတိတ်တွင်, ကမ္ဘာပေါ်တွင် အခမ်းနားဆုံး ဝင်ရိုးစွန်းမီးများကို သင်မြင်နိုင်သည်။. ခရုများ, ရောင်ခြည်, ကုလားကာ, သဘာဝအလင်းရောင်၏ တုန်ခါမှုများသည် ဝင်ရိုးစွန်းမီးများ၏ ထင်ရှားမှုဖြစ်သည်။, မြင့်သောနေရာများတွင်သာ မြင်နိုင်သည်။, အာတိတ်နှင့် အန္တာတိတ်ဒေသများကဲ့သို့ပင်.
ရုံ 5.5 လန်ဒန်ကနေ ရထားနဲ့ နာရီ, တစ်သက်မှာ တစ်ခါသွားရမယ့် ဒီနေရာကို ရောက်ဖို့ အရမ်းလွယ်တယ်။. ၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ဗဟိုတည်နေရာ, အရက်ဆိုင်များ, စားသောက်ဆိုင်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။. နော်ဝေရှိ မြောက်ပိုင်းအလင်းတန်းများကို အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုရန် သင့်အိပ်မက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်သည် ဒီဇင်ဘာလမှ မတ်လအထိဖြစ်သည်။.
5. ဘာလီ, အင်ဒိုနီးရှား
အပူပိုင်းဒေသ, အစိမ်း, ဣနြေ္ဒ, ဘာလီသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပရဒိသုနှင့် ထိပ်တန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။5တစ်သက်မှာ တစ်ကြိမ် ခရီးစဉ်များ. ရှေးဟောင်း ဘုရားကျောင်းများ ၏ အိမ်, ဘာလီယဉ်ကျေးမှု, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် eco-friendly အားလပ်ရက် ငှားရမ်းခ, နေရာထိုင်ခင်း, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင်ကွင်းများနှင့်အတူ, ဘာလီသည် မမေ့နိုင်သော ခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။.
ထို့ကြောင့်, Bali သို့ ခရီးသွားများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မှော်ဆန်သော ရှုခင်းများနှင့် လေထုအရှိဆုံးကို ခံစားကြရသည်။, ဘုန်းကြီးသဘာဝတရားရှေ့တွင် စကားမပြောနိုင်ဘဲ အံ့သြထိတ်လန့်သွားသည့် ရှုခင်းများကို မဖော်ပြထားပါ။. ဖြည့်စွက်ကာ, စိမ်းလန်းစိုပြေသော ချိုင့်များ, နှင့်အံ့မခန်းရေတံခွန်များ, ပို့စကတ်နှင့်တူသော ပုံတစ်ပုံနှင့် အားလုံးသွားလိုသည့် နေရာတစ်ခု ဖန်တီးပါ။, အနည်းဆုံးတစ်သက်တာအတွက်.
6. တစ်သက်တာ ခရီးစဉ်များ: Great Barrier Reef, သြစတြေးလျ
ဆန့်လိုက် 900 ကျွန်းများထက်၊ 2000 ကီလိုမီတာ, ဩစတေးလျရှိ မဟာအတားအဆီးသန္တာကျောက်တန်းသည် ရေငုပ်သမားနှင့် snorkeling ဝါသနာပါသူတိုင်းအတွက် အိပ်မက်မက်ဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ကွင်းစလန်းတွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော သန္တာကျောက်တန်းရှိသည်။, သင်မြင်နိုင်သောနေရာ 1500 ငါးမျိုးစိတ်များ, အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော တိရစ္ဆာန်များ, နှင့် လှပသော သန္တာများ.
Greater Barrier Reef သည် ပင်လယ်အောက်ရှိ အံ့ဖွယ်နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည်။. ဒါကြောင့်, မင်းကံကောင်းရင်, မင်းဘေးမှာ ကူးခတ်နေတဲ့ သမိုင်းမတင်မီက သတ္တဝါတချို့ကို မင်းမြင်နိုင်ပါသေးတယ်။. ထိုကွောငျ့, သင့်ရဲ့အိတ်ထုပ်ပိုး, snorkeling သို့မဟုတ် scuba ရေငုပ်ကိရိယာ, တစ်သက်မှာ တစ်ခါသွားလည်ဖို့ Australia မှာရှိတဲ့ Great Barrier Reef.
7. Cappadocia, ကြက်ဆင်
တူရကီရှိ Cappadocia ကိုကျော်ပြီး လေပူဖောင်းစီးခြင်းသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ စွန့်စားခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. ထို့အပြင်, သင်လေပေါ်၌တက်နေစဉ်, အခြားရောင်စုံလေပူဖောင်းများနှင့် Cappadocia မီးတောင်ရှုခင်းကို သင်မြင်တွေ့ရပါမည်။. သို့သျောလညျး, အမြင့်ကြောက်ရင်, ထို့နောက် သင့်ဟိုတယ်ခန်း သို့မဟုတ် ပြင်ပ ကော်ဖီဆိုင်မှ လေပူဖောင်းများကို ကြည့်ရှုပါ။, မမေ့နိုင်သော အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မည်။.
Adrenaline သည် တိမ်ထဲတွင် ရှိနေခြင်းအပြင်၊, Cappadocia ၏ထူးခြားသောမြေ၏ခမ်းနားမှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။. ဥပမာအားဖြင့်, ဘုန်းကြီးချိုင့်ဝှမ်းသည် ကုန်းမြေအနှံ့ စိုက်ထူထားသော မီးခိုးခေါင်းတိုင်ပုံသဏ္ဍာန် ကျောက်သားများနှင့် ပြည့်နေသည်။. ထို့အပြင်, ကြေးခေတ်အိမ်များနှင့် ဘုရားကျောင်းများကို တောင်များတွင် ထွင်းထုထားသည်။, Cappadocia တွင်လည်ပတ်ရန်မှတ်သားဖွယ်နေရာများဖြစ်သည်။. အနှစ်ချုပ်ရန်, Cappadocia သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားမည်သည့်နေရာမှ မမြင်ရနိုင်သော နေရာများဖြစ်သည်။.
8. တစ်သက်တာ ခရီးစဉ်များ: ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း
ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း ဘယ်အချိန်မဆို မေ့မရနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။, သို့သော် ဆောင်းရာသီတွင် ၎င်းတို့သည် အထူးလှပသည်။. နွေဦးနှင့် နွေရာသီတွင် တောင်တက်ခြင်း နှင့် ပြင်ပအားကစားများကို သင်နှစ်သက်သည်။, ဆောင်းရာသီမှာ နှင်းဖိနပ်စီးဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။. ဟုတ်ကဲ့, နှင်းဖိနပ်စီးခြင်းသည် ထူးခြားသောဆောင်းရာသီအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။, သင့်လျော်သောဖိနပ်နှင့်, Alpine ရှုခင်းကို သင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။.
တစ်မူထူးခြားသော ဆောင်းရာသီ အားကစားသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ 6,000 လွန်ခဲ့သောနှစ်များက နှင်းထူထပ်သော Swiss Alps တွင် အလွန်ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။. Chamonix နှင့် Mont Blanc မှ Ecrins အထိ အမျိုးသားဥယျာဉ်, နှင်းဖိနပ်စီးရင်း ရှုခင်းအလှဆုံးတောင်ပေါ်ရှုခင်းတွေကို သင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။. အမှုအရာတက် Sum မှ, Swiss Alps ကို bucket-list destination အဖြစ် လူသိများပါတယ်။, ဒါပေမယ့် နှင်းဖိနပ်စီးခြင်းက အဲဒါကို တစ်မျိုးဖြစ်စေတယ်။ 10 တစ်သက်မှာ တစ်ကြိမ် ခရီးစဉ်များ.
9. Patagonia, အာဂျင်တီးနား
ရေခဲမြစ်များ, လှပသောတောင်တန်းများ, သစ်တောများ, ရိုးစင်းသော ရေကန်များ, အာဂျင်တီးနားရှိ Patagonia သည် တောင်တက်ပရဒိသုဖြစ်သည်။. ထို့အပွငျ, လမ်းများ နှင့် အံ့မခန်း မြင်ကွင်းများ အပြည့်, Patagonia ၏ အမျိုးသားရေခဲပြင်ပန်းခြံသည် မြောက်အမေရိကရှိ တစ်သက်တာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။.
ဖြည့်စွက်ကာ ဂန္တဝင်တောင်တက်လမ်းများ, အလွန်စွန့်စားသော ခရီးသွားများသည် ရီယိုနီဂရိုး ရေခဲမြစ်ပေါ်သို့ တက်နိုင်သည်။, ဥပမာ. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, အေးခဲနေတဲ့ တောင်တက်တာကို သင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။, adrenaline နှင့် ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံအတွက် နှင်းထူထပ်သောတောင်. ဒါက အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ Patagonia မှာ သင်လုပ်နိုင်တဲ့ ထူးထူးခြားခြားအရာတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။.
10. တစ်သက်တာ ခရီးစဉ်များ: ဂျပန်
မတ်လလယ်နှင့် ဧပြီလကြားတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသည် လှပသော ပန်းရောင်နှင့် အဖြူရောင် ချယ်ရီပန်းများ ပွင့်သည်။. Sakura ပွင့်တဲ့ အရောင်တွေက ကျိုတို, တိုကျို, မှော်ဆန်သောလေထုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုရှိသော အခြားမြို့များ. စွဲမက်ဖွယ်ရာ, Sakura ပွင့်နေစဉ်, ဂျပန်နိုင်ငံသည် အိပ်ငိုက်ခြင်းသို့ ကျရောက်ခဲ့သည်။, အထူးငြိမ်းချမ်းမှုတစ်ခုသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အရှိန်အဟုန်မြင့်သောဘဝများကို လွှမ်းခြုံထားသည်။. ဤထူးခြားသောလေထုသည် နွေဦးအားလပ်ရက်အတွက် ဂျပန်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူ သန်းပေါင်းများစွာကို ဆွဲဆောင်စေသည်။.
ထို့ကြောင့်, မှော်ဆန်တဲ့ အချိန်တစ်ခုအတွက် အဝေးကို ခရီးထွက်ဖို့ အခွင့်အရေး ရဖူးရင်, နွေဦးရာသီသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။. အပြင်က ကြိုးစားတယ်။ ဒေသခံအစားအစာ, ရွှေဘုရားကျောင်းများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း။, နှင့် တိုကျို မိုးမျှော်တိုက်များ ၊, Sakura သစ်ပင်တွေအောက်မှာ ပျော်ပွဲစားထွက်တာက တစ်သက်မှာ တစ်ကြိမ်လောက် ကြုံဖူးမှာပါ။.
ငါတို့မှာ တစ်ဦးကရထား Save သင်ဤခရီးများစီစဉ်ရန်ကူညီခြင်းအတွက် ၀ မ်းမြောက်လိမ့်မည် 10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တစ်သက်တာခရီးဆုံးနေရာများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “တစ်သက်တာခရီးဆုံးနေရာ ၁၀ ခု” ကို သင့်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းလိုပါသလား။? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fonce-lifetime-destinations%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)